सति प्रथा समाप्तिको सय वर्षः अवशेषहरु अझै छन् समाजमा - Narayanionline.com
सति प्रथा समाप्तिको सय वर्षः अवशेषहरु अझै छन् समाजमा
रचना सापकोटा –
भनिन्छ जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ खुसीसाथ देवताहरूको बास हुन्छ । तर एक जमना यस्तो थियो जहाँ श्रीमान को मृत्यु हुँदा श्रीमती पनि सगैँ जलेर मर्नु पर्ने अवस्था थियो । नेपालको त्यो ‘कु’ प्रथालाई इतिहासले सति प्रथा भनेर चिन्दछ । सुन्दै अचम्म लाग्ने ‘सति प्रथा’ नेपाल बाट उन्मूलन भएको आज १०० बर्ष पुरा भएको छ । यो सय वर्षमा हामीले के पायौँ, के गुमायौँ सामाजिक जागरणको यो सय वर्षमा महिलाले के प्राप्त गरे ?
महिला हिंसाको सबैभन्दा चरम रुप मानिएको सतिप्रथाको नेपालमा औपचारिक रूपमा चन्द्र शंसेरले १९७७ असार २५ मा अन्त्य गरेका थिए । तर आज साच्चै सति प्रथा उन्मुलन भएकै छ त ? भन्ने प्रश्न अनेक उठ्ने गर्दछन । यहाँ अझै यस्ता कु–प्रथा कायम छन । जसले सति प्रथाको झल्को दिने गर्छ । शारिरिक दहन मात्र त रोकिएको हो, नारीलाई अझै पनि बोक्सी,बिधवा, छाउपडि र दाइजो प्रथाको नाममा मानसिक रूपमा जलाई रहेको छ मेरो समाजले । समाजमा घटेका घटनालाई नियाल्दा पछिल्लो समय झन दर्दनाक अवस्था छ । छाउपडीको नाममा प्राकृतिक बरदानलाई सरापको नजरले हेरिएको छ हाम्रो समाजमा । एउटा छोरी आमाको गर्वमा रहँदादेखि नै भेदभाव सुरु भएको उसको मृत्युपछि गरिने संस्कारमा पनि विभेद गरिन्छ । सति प्रथामा एउटा नारी एक पटक मर्थिन तर आज हाम्रो समाजले बारबार सयौ पटक मारिरहेको छ । सतिप्रथाका अझै अवशेषहरु हाम्रो समाजमा छन् ।
मेरो विचारमा सति प्रथा विस्तारै आएर मानिसहरूको बुद्धि र स्वार्थले गर्दा बिग्रिँदै आयो । अस्ति भर्खर हेटौँडामा घटेको सुस्मिता केसीको घटनालाई हेर्दा लाग्छ अझै पनि नारी प्रतिको सामाजिक सोच बदलिएको छैन । सति प्रथामा नारीको शरिर मृत श्रीमानको चिता माथी राखेर दहन गरिन्थ्यो । केही समयको लागी उसलाई अवश्य पिडा हुन्थ्यो तर अहिले श्रीमान मरेर गए पछि हाम्रो समाजले त्यो भन्दा बढि शारिरिक र मानसिक यातना दिन्छ । अनि हामी कसरी भन्न सक्छौ कि नेपालमा सति प्रथाको अन्त्य भयो ?
धर्म सस्कृतिका नाममा नारीमाथि गरिने दमन,शोषणको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्ता कु–प्रथा र कु– संस्कृतिको अन्त्य नै चेतनामूलक समाजको निर्माण हो ।
प्रचण्डका राजनीतिक गुरुः खम्बसिं कुँवर ‘काजी बा’
किन बन्ने शाकाहारी ?
पछाडि खल्तीमा ‘पर्स’ बोक्नुहुन्छ ? सर्तक हुनोस् मेरुदण्डमा असर गर्ला
मिर्गौलाको पत्थरी हुँदा के–के नखाने ?
अझै रोकिएन गैँडा मर्ने क्रम, संरक्षणमा चुनौती
ट्रकसँग स्कुटी ठोक्किँदा धरानमा एक नर्सको मृत्यु
लकडाउनको विरोधमा स्पेनमा हजारौँले गरे कार मार्फत प्रदर्शन
बेलायतमा २१ वर्षीया युवतीको कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु
नेपाली कांग्रेस कालिकाद्वारा मृगौलापीडितलाई सहयोग
चितवनको माडी नगरपालिकाले अयोध्याको इतिहास खोज्न थाल्यो, पण्डितको भेला गरियो
लागुऔषध कारोवारीमा नयाँ जुक्ति : पानीमुनि नुहाएको बहानामा हुन्छ किनबेच